ChatRoom | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ChatRoom. Show all posts
အင်တာနက် မလိုဘဲ Message ပေးပို့နိုင် Chat နိုင်တဲ့ FireChat v6.0.5 Apk
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဆက်သွယ်ရေး အတွက် Messenger တွေကို လူတွေ စွဲလမ်းစွာ အသုံးပြုနေ ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Messenger တွေကို အသုံးပြုရင် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု ရှိဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု မရှိဘဲ အသုံးပြုလို့ ရပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းပညာ ပါရှိတဲ့ Messenger က FireChat ဖြစ်ပါ တယ်။ ပေနှစ်ရာ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ FireChat User အချင်းချင်း Message, Photo ပေးပို့ ရယူနိုင်ဖို့ အတွက် အင်တာနက် မလိုအပ် ပါဘူး။ အင်တာနက် ချိတ်ဆက် ထားရင်တော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ FireChat အသုံးပြု သူတွေနဲ့ စာပေးပို့ ရယူနိုင် ပါတယ်။
FireChat ကို အင်စတော လုပ်ပြီးရင် Signup လုပ်ဖို့ အတွက်တော့ အင်တာနက် ခဏတာ ဖွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် Username, Email တို့ကို ဖြည့်ပေးပြီး Signup လုပ်ပါ။ နောက် အဆင့် မှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ FireChat User တွေကို ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပြီး Follow လုပ် နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ FireChat ရဲ့ Main Screen ကို ရောက်ရှိမှာပါ။
ဒီ Tutorial မှာတော့ အနီး အနားမှ FireChat User တွေနဲ့ Message တွေ ၊ ဓါတ်ပုံတွေ ပေးပို့ရယူ နည်းကိုသာ အဓိက ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ FireChat ကို သင့် အလုပ်မှ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်များ ဒါမှမဟုတ် နေအိမ်မှ မိသားစု ၀င်များရဲ့ ဖုန်းမှာလည်း အင်စတော လုပ်ပြီး အထက်ပါ နည်းအတိုင်း Signup လုပ်ပေး ရမှာပါ။ ပြီးရင် အင်တာနက် ဆက်သွယ် မှုကို ပိတ်နိုင် ပါပြီ။
FireChat မှာ Signup လုပ်ပြီးရင် အနီးအနားမှ FireChat User အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဖို့ အတွက် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု မလိုအပ် တော့တဲ့ အတွက် Mobile Data ကို ပိတ်ပါ။ ဖုန်းတွေ အားလုံးမှာ WiFi နဲ့ Bluetooth ကို ဖွင့်ပါ။ အချိန် အနည်းငယ် ကြာရင် အနီး အနားမှာ FireChat User တွေ ရှိကြောင်း Notification တစ်ခု ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Message သာမက ဓါတ်ပုံ များကိုလည်း ပေးပို့ ရယူနိုင် ပါတယ်။
FireChat ကို Android , iPhone တို့မှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ တစ်ခု မှတ်ထား ရမှာက FireChat မှာ ပေးပို့တဲ့ Message များကို အနီး အနားမှ FireChat User အားလုံးက တွေ့မြင်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ FireChat မှာ Chatroom တွေ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Online ရော Offline ပါ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ Chatroom တစ်ခုမှာ လူတစ်သောင်းကျော် ပါဝင်နိုင် ပါတယ်။
စာရေးသူရဲ့ အတွေ့ အကြုံ အရ ဖုန်းနှစ်လုံးနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ FireChat ဟာ တည်ငြိမ်မှု သိပ် မရှိသေး ပါဘူး။ FireChat ဟာ လူရာပေါင်း၊ ထောင်ပေါင်း များစွာ အုပ်စုဖွဲ့ အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ ဆက်သွယ် မှုဟာ အလွန် ကောင်းမွန် တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ အဲဒီ အတွက် လူများလေ ပိုမိုကောင်းလေ ဖြစ်ပါ တယ်။
FireChat ကို Android 2.3.3 နဲ့ သူ့ အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
From : www.pyaephyo.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 13, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, ChatRoom, Messenger, Phone Application
WhatsApp Messenger v2.11.515 apk for android (latest version)
Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင်သူများ အတွက် ကတော့ မိသားစုများနှင့် နိုင်ငံတွေ ဝေးကွာနေပြီး
တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် စကားပြောမယ် ဆိုရင် ဒီကောင်လေးကတော့ viber, line နှင့်
facebook လိုမဟုတ်ဘူး လိုင်း နည်းနည်း ရှိတာနဲ့ တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်ထံသို့ အမြန်ဆုံး
Massage တစ်ခုကို ပို့နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ချစ်စရာ ကောင်းလောက်တဲ့ Sticker များစွာ ပါဝင် လာပြီး Message box
တွင်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး ပို့ပေးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
By : ဝင်းလှိုင်(နည်းပညာ)
ကဏ္ဍ Android, ChatRoom, Phone Application
Video2Webcam 3.5.3.8 Multilingual
Video2Webcam 3.5.3.8 Multilingual | 2.76 MB
Home Page – http://www.video2webcam.com
ကဏ္ဍ ChatRoom, Video-software, webcome
ခုရက်ပိုင်း လူသုံးများ လာတဲ့ ဖုန်းချက်တင် ဆော့ဝဲလေး HoverChat (formerly Ninja SMS) v2.2.3 Apk
ခုရက်ပိုင်း လူသုံးများ လာတဲ့ ဖုန်းချက်တင် ဆော့ဝဲလေး HoverChat (formerly Ninja SMS) v2.2.3
Apk လေးပါ တခြာ ချက်တင် ဆော့ဝဲတွေနဲ့ မတူတဲ့ ပုံစံလေးပါ သုံးကြည့် လိုက်ပါ ကြိုက်သွားမှာပါ။
HoverChat (formerly Ninja SMS) v2.2.3 Apk | 1.3 MB | Resumable Links | Requires Android:2.2 and up |
Ninja SMS lets you have similar popup features as Facebook’s new “Chat Heads” feature without needing to replace your current launcher. Plus, we support all phones 2.2+ already :) (including HD devices such as Samsung Galaxy S 4, Sony Z, HTC One X etc.)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, January 06, 2015 No comments:
WeChat 6.0.0.68_r859525 APK for Android
Social ကမ္ဘာထဲက All in One တစ်ခုဖြစ်တဲ့ WeChat ကို နောက်ဆုံး ဗားရှင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများတော့ Update Version ကလည်း လစဉ်နှင့် အမျှ တက်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ တစ်ဝမ်း ဘယ်
နေရာ သွား သွား ဘာလုပ်လုပ် ချစ်သူ ခင်သူ ကို ရုပ်ထွက် ကောင်းကောင် လေးနဲ့ ဖုန်းပြော ချင် ရင်တော့
ဒီဆော့ဝဲလေးကိုသာ အသုံးပြုစေချင် ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးဟာ High-quality free calls ကို အကောင်းဆုံး Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
communications app ဖြစ်တဲ့အတွက်... text (SMS/MMS), voice & video calls, moments, photo
sharing, and games ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်သလို... သူငယ်ချင်း အချင်းအချင်း...Group Chat..လည်း
ဖန်တီးနိုင်သေးတဲ့ အပြင် Real Time Location စတဲ့ အကောင်းဆုံး Feature ပေါင်းများစွာ ပါဝင်လာတဲ့ ဗားရှင်း
Update မလုပ်ရသေးတဲ့ ဘော်ဒါတွေကတော့ အောက်ကလင့်တွေမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
▼ usersfiles ▼ (OR) ▼ mediafire ▼
From : အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by Win Hlaing
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, October 31, 2014 No comments:
Android Phone ကိုင်ဆောင်ထားသူများ အတွက် Facebook Chat လေး တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Easier & Faster Facebook chat office.
Chat with your friends in Facebook chat with AsapChat. AsapChat help you filtering friends fastest, notification in status bar for incoming message or changed statuses. Vibrating and sound notification when selected friends coming online.
- Changed status, write status
- View offline presence
- Notification of income messages;
If you enjoy AsapChat, please give it some stars and your well appreciated comment!
Requires AndroidAndroid 2.3 or higher
▼ play store ▼ ▼ appbrain ▼ ▼ 1mobile ▼ ▼ usersfiles ▼
ကဏ္ဍ Android, ChatRoom, Facebook, Phone Application
APK အသစ်လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ် ။ Video Call & Text တွေကို Unlimited နဲ့ အခမဲ့
အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ် ။ Wifi, 3G, 4G နဲ့ အသုံးပြုနိုင်သလို Video Call chat မှာလည်း HD
quality မို့ ဒိပြင် Video chat တွေထက် ပိုပြီး ကြည်လင်နိင်မယ် ထင်ပါတယ် ။
iPhone အတွက် အောက်မှာ မူရင်း ဝဘ်ဆိုဒ်လင့်လေးကနေ သွားရောက် ဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ် ။ ကွန်ပြူ
တာအတွက်တော့ မရသေးပါဘူး ။
• Featured 17 Times
• Best iPhone Apps This Week (The Guardian)
♥ Need help or haveasuggestion? Email us at msupport@rounds.com
▼ play store ▼ ▼ usersfiles ▼ ▼ 1mobile ▼
Requires AndroidAndroid 4.0 or higher
ဒီကောင်လေး ကတော့အထူးပြောစရာ လိုတော့မယ် မထင်ပါဘူး အကုန်လုံး ရင်းနှီးပြီးသား သိထားပြီးသားလို့
ထင်ပါတယ် ။ အခု ကျွန်တော်တင်ပေး ရတာက version4.6.1 လေး update လေးမို့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ ကတော့ ဒီကောင်လေး ရှိသူအချင်းချင်း free call / free massage တွေ free video
call ကို အင်တာနက်လိုင်း ရှိရုံနဲ့ ပိုက်ဆံတပြား တချပ်မှ မကုန်စေပဲ free စိတ်ကြိုက် အသုံး
ပြု နိုင်ပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ကောင်လေး ပါပဲဗျာ ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 22MB ရှိပြီး android ဖုန်း အားလုံးမှာ အသုံးပြု နိုင်
ဒီကောင်လေး သုံးမယ် ဆိုရင်ဖြင့် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် ။
Updated: August 26,2014
Requires AndroidAndroid : 2.3 or higher
▼ 1mobile ▼ ▼ play store ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, September 06, 2014 No comments:
LINE whoscall - Caller ID & Block
Android Phone + Tablet တွေ အတွက် အင်တာနက် ရှိယုံနဲ့ ဖုန်း အလကားပြောလို့ ရတဲ့ ဆော့ဝဲလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေး ရဲ့ ထူးခြားချက် ကတော့ အင်တာနက်ရှိပြီး တစ်ဖက်လူက Line software နဲ့ ဖုန်းခေါ်ရင် ဘယ်ကနေ
ခေါ်နေတယ် ဆိုတာကို တည်နေရာနဲ့ တကွ ပြသပေးနိုင် ပါတယ်။
Google Play Store မှာ 29/8/2014 ရက်နေ့ ကမှ ထွက်ရှိ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေး ကိုတော့ Android 2.
2 အထက်ကို အကောင်းဆုံး စိတ်ချ လက်ချ သုံးနိုင်ပါတယ်။
Current Version: 3.13.0.1
▼ usersfiles ▼ ▼ play store ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 01, 2014 No comments:
Facebook အသုံးပြုသူ အချင်းချင်း Free Video Call ခေါ်နိုင်မယ့် - Seen v1.8 APK
အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ Application လေး ကတော့ အသစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထွက်ထားတာ အတော်လေး ကြာခဲ့ ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုနောက်ပိုင်းမှ Facebook ခေတ်စားတာတဲ့အတွက် Seen ဆိုတဲ့ Application
လေး ကိုပြန်တင်ပေး လိုက်တာပါ။
ဒီကောင်လေးက Facebook ထဲမှာ မိမိနဲ့ Friend ဖြစ်တဲ့ သူ အချင်းချင်း Free Video Call ခေါ်ဆိုပေးနိုင်တဲ့ Application
လေး တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ခေါ် ဆိုပုံလည်း လွယ်ကူတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် မရှင်းပြတော့ ပါဘူးနော်။ Skype တို့ Tango
တို့မှာ အသုံးပြုရတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
Android OS 21. နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, August 26, 2014 No comments:
အားလုံး သိပြီးသား Application လေးဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် … အခု Tango လေး ကတော့ PC မှာ
အသုံးပြုချင် သူတွေ အတွက်ပါ … အကောင့်ဖွင့်ရ တာလဲ လွယ်ကူ သလို အသုံးပြု ရာမှာလဲ အဆင်ပြေပါ
တယ် … ရုပ်ထွက်လဲ ကောင်းမွန်ပါတယ်။
မြန်မာစာတွေကို တော့ မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှီသေးပါ ခဗျာ။
It is impossible to review Tango without talking about Skype, but the good news is, for the most part, they’re actually very comparable products.
The features are similar, the call quality is pretty much identical, and the functionality is almost identical.
The only real difference is that Skype has the more name recognition, but Tango makes it easier to invite non-users to the service.
So if you’re looking foraSkype alternative that is both free and reliable, this isavery solid option.
ကဏ္ဍ ChatRoom, Messenger, ဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲလ်